Garsoore Clattenburg oo ka tegaya Premier League, kana shaqeysan doona horyaalka Saudi Arabia!!!
Thursday, January 24th, 2019 - 13:12:30
Thursday February 16, 2017 - 20:28:02 in Wararka by Kubad Bile
Garsooraha caanka ah ee Mark Clattenburg ayaa diyaar u ah in uu ka dhaqaaqo Premier League si uu ugu biiro Saudi Arabian Football Federation, sida ay xaqiijiyeen Professional Game Match Officials Limited (PGMOL).
Clattenburg ayaa daaha ka qaaday in uu bilo yar keddib ka tegi doono horyaalka England iyo guud ahaan Yurub – sida ciyaartoy badan oo reer Yurub ah ay sameeyeenba, England garsoorahan u dhashay ayaana sidoo kale lala xiriirinayay Chinese Super League.
Waxau u noqon doontaa guul dhaqaale garsoorahan 41-jirka ah, in kastoo uu Clattenburg shaqadiisa horyaalka England iyo Yurub sii wadan doono ka hor inta uusan dhaqaaqin.
Saaxiibkiis oo ahaa garsoore caan ka ahaa Premier League Howard Webb ayaa loo magacaabay madaxa Garsooreyaasha ee SAFF bishii August 2015, xiriirka Sucuudiga ayaana ka faa’iideysanaya garsooreyaashan, isaga ayaa noqon kara Video Assistant Referee (VAR) xubin sare oo ka tirsan haddii uu aado MLS.
"Mark Waa garsoore tayo badan, wuxuu muddo dhan ahaa garsoore kalsooni iyo ciyaar wanaagsan.
"Waxaan ka faa’iideysan doonnaa fursadda uu na siiyay Mark isagana waxaan uga faa’iideyn doonnaa dhaqaalaha halkan yaalla."